I-GUOWANG C80Y UMTSHINI WE-Automatic HOT-FOIL STAMPING
I-GUOWANG C80Y UMTSHINI WE-Automatic HOT-FOIL STAMPING
I-feeder ekumgangatho ophezulu eyenziwe e-China kunye neesuckers ezi-4 zokuphakamisa iphepha kunye neesuckers ezi-4 zokuthunyelwa kwephepha ziqinisekisa iphepha lokutyisa elizinzile kwaye elikhawulezayo.Umphakamo kunye ne-engile yeesuckers zilungelelaniswa ngokulula ukugcina amashiti ngokuthe ngqo.
Ingqumba yeLateral inokulungelelaniswa ngemoto ukwenzela ukutya okuchanekileyo kwamaphepha.
Isixhobo sokupakisha kwangaphambili senza ukondla okungayekiyo kunye nemfumba ephezulu (Ubukhulu bokuphakama kwemfumba ukuya kuthi ga kwi-1600mm).
20 indawo yokufudumeza
3 Longitudinal, 2 i-foil shaft enqamlezileyo
Ubalo oluzenzekelayo lwepateni ngekhompyutha ekrelekrele
IYUNITHI YOKUSHISA IZITAMBO
Uxinzelelo lwesitampu olulawulwa yi-YASAKAWA Servo System.
Iifoyile ezimbini ezahlulahlula i-blower yobukhulu bestampu.
Ulawulo lobushushu olwahlukileyo nge-servo enonyamezelo ±1℃.
I-3 Longitudinal (Ubukhulu 6), i-2 ye-foil shaft enqamlezayo ngu-YASAKAWA ulawulo lwe-servo
Max.I-Foil ubukhulu be-250mm
Foil break detector
Isibambi sefoyile sinokutsalwa ukuze kube lula ukutshintsha
2 Led touch screen kumatshini, 1 eyahlukileyo Led touch screen solawulo foil-stamping
Ikhompyuter ekrelekrele iya kubala kwaye inike esona sisombululo sepateni eyahlukileyo ngenyathelo okanye ngokutsiba
I-COMMPACT FOIL REWINDER
I-Compact foil rewinder isemgangathweni kunye nomatshini
Iimfumba ezigqibeleleyo zinokubunjwa kwiipalethi ezihamba kwiintsimbi zokupakisha kwangaphambili.Oku kwenza igalelo elibalulekileyo kwimveliso egudileyo kwaye vumela umqhubi ahambise imfumba elungisiweyo kwi-feeder ngokuchanekileyo nangokufanelekileyo.
Ukwahlula ulawulo lokuqhuba kwingqumba engundoqo kunye nengqumba encedisayo
I-PLC kunye nekhamera ye-elektroniki yokulawula ixesha
Isixhobo esichasene nomqobo sinokuphepha umonakalo womatshini.
I-Japan Nitta ihambisa ibhanti yokondla kwaye isantya siyahlengahlengiswa
Ukubekwa okuchanekileyo kwe-Cutting chale elawulwa ngabenzi boluvo oluchanekileyo kunye nesixhobo sokutshixa esizenzekelayo
Ukunciphisa isixhobo sokuthengisa
Uhlengahlengiso oluncinci lwamandla okusika (ukuchaneka koxinzelelo kunokufikelela kwi-0.01mm, uMax.Uxinzelelo lokufa lunokuya kuthi ga kwiitoni ezingama-300) yigiya yeentshulube eqhutywa yi-servo motor kwaye ilawulwe ngokulula nge-15 intshi yesikrini sokuchukumisa.
I-Crankshaft yenziwe ngentsimbi ye-40Cr.
Intsimbi ye-HT300 ye-ductile yezakhelo zoomatshini kunye neeplaten
Iiseti ezi-7 zemivalo yokubamba eneentsimbi ezenziwe nge-alloy ye-aluminium ekhaphukhaphu kunye neyomeleleyo ene-ultra hard coat kunye ne-anodized finish iqinisekisa ukubhaliswa kwephepha ngokuchanekileyo kunye nokuhambelana.
Ibar yegripper ekumgangatho ophezulu evela eJapan enobomi obude
Ibha yokubamba eyenzelwe ngokukodwa ayifuni sikhala sembuyekezo ukuze uqinisekise ubhaliso oluchanekileyo lwephepha
Ukusika iipleyiti ezinobunzima obahlukeneyo (1pc ye-1mm, i-1 pc ye-3mm, i-1 pc ye-4mm) ukuze kube lula ukutshintsha umsebenzi
Umgangatho ophezulu we-Renold chain ovela eNgilani kunye nonyango olwandisiweyo ngaphambili luqinisekisa ukuzinza kunye nokuchaneka kwexesha elide.
Inkqubo yokuqhubela isalathisi soxinzelelo oluphezulu kulawulo lokubeka indawo yebar
Isixhobo sokukhusela ukulayisha ngaphezulu kunye ne-torque limiter senza inqanaba eliphezulu lokhuseleko kumqhubi kunye nomatshini.
Ukuthambisa okuzenzekelayo kunye nenkqubo yokupholisa kwi-drive ephambili kunye nokuthambisa okuzenzekelayo kwikhonkco eliphambili.
Iyunithi yeSitampu seFoil
Iirola zokutsalwa zefoyile ezilawulwa ngumntu ngamnye ( iiseti ezi-3 kwilongitudinal kunye neeseti ezi-2 kwicala elinqamlezayo) ziqhutywa yi-YASKAWA servo motors
Longitudinal ifomathi epheleleyo inkqubo yokutya ngefoyile yokunyathela kwicala le-2 ngaxeshanye enceda kakhulu ekugcineni iifoyile kunye nexesha lokutshintsha iifoyile.
Iindawo ezingama-20 ezilawulwa ngokwahlukeneyo zokufudumeza, kusetyenziswa inkqubo yokufudumeza intubation, ngonyamezelo ngaphakathi ± 1C
Iseti ye-1 ye-ductile yentsimbi yobusi yokusukela kunye nesixhobo sokutshixa sokufa
Isixhobo sexesha lokuhlala kwindawo enkulu yesitampu
Isixhobo sokwahlula esi-2 esivuthela umoya
Inkqubo yebrashi isusa ifoyile esetyenzisiweyo kwicala lomatshini, apho inokuthathwa khona kwaye ilahlwe.
Abenzi boluvo babona ikhefu lefoil.
Ukhetho lwe-foil rewinder i-WFR-280 yokulahla i-foil esetyenzisiweyo, yenza ukuba iifoyile zifakwe kwiishafu ezintandathu ezizimeleyo kwimodyuli enikezelweyo.
Ngaphambili: I-GUOWANG T-106Q I-DIE-CUTTER EZIQHELEKILEYO EZIQHELEKILEYO ENE-BAHLUKO
Okulandelayo: I-GUOWANG R130Y UMSHISHINI OZIZENZAKALELAYO OTSHINTSHA NGEFOLI
Ibhrashi ye-braking ehlengahlengiswayo elawulwa yi-AC motor inceda ukukhulula iphepha kwi-gripper kunye nokufumba iphepha ngesantya esiphezulu kunye nokulungelelaniswa okugqibeleleyo.
Ubude bemfumba yokuhanjiswa bufikelela kwi-1350mm.
Izixhobo ze-Photoelectric zithintela ukunyuka kunye nokwehla kwemfumba yephepha lokuhambisa
I-Pile ingabalwa nge-sensor optical (standard) kwaye iyunithi inokudibaniswa kunye nesixhobo sokufaka i-slips yephepha kwi-pile (ukhetho).Kuya kunceda ukususa izinto ezingenanto kwaye zipakishwe kwiimeko.
Umatshini wonke unokulungelelaniswa nge-10.4 intshi yokujonga i-intshi kwicala elingasemva
Irekhi yonikezelo oluncedisayo ilungiselelwe ukuhanjiswa okungayekiyo.
I-Electronic detectors, i-micro switched kunye neeseli ze-photoelectric ezilawulwa yi-PLC kumatshini wonke
Ukutshintsha kwekhamera ye-elektroniki kunye ne-encoder
Wonke umsebenzi omkhulu unokwenziwa nge-15 kunye ne-10.4 ye-intshi ye-touch monitor.
Ugqithiso lokhuseleko lwe-PILZ njengomgangatho luqinisekisa umgangatho ophezulu wokhuseleko.
Iswitshi yangaphakathi yokutshixa izalisekisa imfuno yeCE.
Isebenzisa iindawo zombane ezibandakanya iMoeller, i-Omron, i-Schneider relay, i-AC contactor kunye ne-air breaker ukuqinisekisa uzinzo kwixesha elide.
Umboniso wempazamo ozenzekelayo kunye nokuzixilonga.
Iqonga lokusebenza kunye nomlawuli wokufudumeza; 1 iseti yebhokisi yezixhobo kunye nencwadana yokusebenza.
Ukunyathela ngeFoil okuzenzekelayo kunye ne-Die-cutting Mach...
I-GUOWANG R130Y UMSHISHINI OZIZENZAKALELAYO OTSHINTSHA NGEFOLI
UGUOWANG C-106Y UKUSEKA KUNYE NEFOIL ISTAMPING MA...
Guowang Automatic Hot Foil-Stamping Machine